Imifanekiso yeFotohop: apho uyikhuphele khona kwaye uyenze ibe esemgangathweni | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Encarni Arcoya | | Ukuhlelwa
Umyili siyazi ukuba ukusetyenziswa kwe iifoto zefotoshop yinto ebalulekileyo. Oku kunikezela ngokwenyani kunye nendalo kwimifanekiso evusa umdla wabo bayijongileyo, kwaye yile nto kanye ayifunayo umbhali.
Ukudala ubunyani bokwenyani, ngokungathi umfanekiso unokuchukumiseka, ngokungathi uburhabaxa okanye ukuguda kwesithombe kuqatshelwe zezinye zeenjongo zomyili, kwaye ukufezekisa oku, ukwenziwa kubaluleke kakhulu. Kodwa, ukuba awufuni ukuyenza kwasekuqaleni, okanye kufuneka ube nezinto ezahlukeneyo kwiiprojekthi zakho zemizobo, nantsi ke siza kuthetha ngewebhusayithi apho unakho khuphela iifoto zeFotohop.
1 Zithini izinto zeFotohop
1.1 Iindidi zokwenza
1.2 Indlela yokongeza ubume kwiFotohop
2 Uyifumana phi imifanekiso yeFotohop
2.3 Ubume besitokhwe simahla
2.6 Imibhalo yasimahla kaMayang
2.7 Imifanekiso yeFotohop: IArroway Textures
Zithini izinto zeFotohop
Ukuba sithetha kwijoggon yokufota ngokwedijithali, iifoto zeFotohop zinokuchazwa njengamaleko afakwa kwifoto ngenkqubo yokuhlela kwaye ene umphezulu ofanisa ukuthungwa. Oko kukuthi, iphepha, ukhuni, amabala, njl. nantoni na enika loo mfanekiso ubunyani.
Ukufumana uburhabaxa unokufota into oyifunayo, uyiskene okanye wenze ezakho izinto kwiFotohop.
Isizathu sokusebenzisa uburhabaxa kukunika inqanaba lobunzulu kunye nemvakalelo kuloo mfanekiso. Ngamanye amagama, imalunga nokunxibelelana nabasebenzisi abajonga umfanekiso, ngendlela evusa iimvakalelo. Ke ngoko, umfanekiso onale ndlela uthatha umsebenzi omninzi ukuze ubonakale umhle, ngokungathi unikwe umaleko wobunyani ekufuneka ubekwe kakuhle ukuze ungabonwa.
Kuya kufuneka uyazi ukuba akukho luhlobo lunye lwezixhobo. Kukho okuninzi ekunokukhethwa kuko. Kuya kuxhomekeka kwisiphumo ofuna ukufezekisa. Ke, umzekelo, unokufumana:
Iimpawu zendalo. Zizo ezifuna iziphumo ezinxulumene nemithambo-luvo: ivumba, ukubona, incasa, ukubamba ... Umzekelo, ixolo lomthi, amaza olwandle, umoya ...
3D noburhabaxa. Babonakaliswe ngokunika ubunzulu kunye nevolumu kumfanekiso ngendlela ebonakala ngathi ivela kwi-2D.
Yobumnandi. Iimpawu zobuciko zizama ukunika umlingo womfanekiso, kunye neenkcukacha eziyimfihlakalo, ezingenangqondo kodwa eziya kuguqula umfanekiso ube liphupha ngokwalo.
Amabala. Iimpawu zamabala zizama ukufezekisa ubunyani bemihla ngemihla. Imizekelo inokuba ngamaconsi kwiikomityi zekofu, ihla kwiscreen sokuhlamba okanye ikhethini, okanye igazi okanye i-inki ebayeni.
Impahla eyolukiweyo. Ukulibala ukungabikho komsebenzi, amalaphu afuna ukulinganisa izinto ezenziwe ngazo, ukusuka kwezithambileyo ezifana nesilika, ivelvet, uboya, ukuya kweyona "irhabaxa".
Indlela yokongeza ubume kwiFotohop
Khawufane ucinge ukuba ubufumene ubunjani obebubukhangela kwaye ufuna ukuyisebenzisa kwiprojekthi yakho. Nangona kunjalo, ukuba usaqala kwaye awuzange uyenze ngaphambili, kunokuba nzima.
Ke apha sikushiya amanyathelo omele ukuwabeka ukubeka i-Photoshop. Zininzi iindlela, kodwa apha sikunika eyona ilula kuzo zonke.
Vula i-Photoshop kunye nomfanekiso wakho, ukongeza kubume obukhethileyo kwaye ufuna ukuba le foto ibe nayo.
Yiya ekubunjweni kwaye ucofe uMfanekiso / uhlengahlengiso / ukuHanjiswa kwesithuba. Oku kususa umbala kwimbonakalo, kuba asiyidingi kakhulu kwiimeko ezininzi.
Dlulisa loo mfanekiso uye kowakho. Ngale ndlela, kuya kwenziwa umaleko omtsha kuhlelo lwakho lweprojekthi.
Guqula imo yokudibanisa ubeko kwi 'Overlay' kwaye utshintshe ukukhanya, ubungqongqo, ukukhanya ... uya kuba nakho ukufumana isiphumo obusikhangela.
Uyifumana phi imifanekiso yeFotohop
Njengoko sisazi ukuba eyona nto ibalulekileyo kuwe kukwazi iwebhusayithi apho unokufumana khona iifoto ze-Photoshop, Siye saqulunqa ezinye zeendawo apho uya kufumana khona imibala. Ngokwesiqhelo ungazifumana nakweyiphi na ibhanki yomfanekiso, ezihlawulelwayo nezasimahla, kodwa kwezinye iiwebhusayithi zinokuninzi. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kuphi?
Eli phepha laziwa kakuhle njengenye yeebhanki ezinkulu zemifanekiso phaya. Ngoku, ayinazo iifoto ezininzi, kodwa inezithwali ezininzi kunye nemifanekiso efanayo.
Kwaye, ewe, ikwanazo neendlela ezahlukeneyo zokwenza. Uninzi lwazo lukuvumela ukuba ukhuphele iifayile zePSD, okwenza kube lula ukusebenza kunye nokuzilungisa.
Le webhusayithi, njengoko igama layo libonisa, isekwe kwimvelaphi yewebhu, imodeli ye-3d, kwaye ewe, ukwenziwa. Kuyo uyakufumana ikhathalogu ebanzi kwaye banethuba lokuba banokubakho bobabini ukuzisebenzisa kunye nokusetyenziselwa urhwebo.
Ubume besitokhwe simahla
Ngaba iwebhusayithi inikezelwe ngokukodwa kwimifanekiso? Ewe ewe, le yenye yazo. Ngoku, awuyi kufumana zonke izitayile, kodwa ikhethekileyo kubume bendalo okanye kwiindonga ezaphukileyo.
Ikwanayo necandelo elikhethekileyo le-grunge textures ukuba yile nto uyikhangelayo.
Apha, nangona ungafumana ubucwebe simahla, phantse zonke kufuneka zihlawulwe ukuze zisetyenziselwe urhwebo. Kodwa inyani kukuba uninzi lwazo luxabisekile ukugqitywa kokufezekiswa kunye nomgangatho ezenziwe ngawo.
Kananjalo kulapho unokufumana khona iintlobo ezahlukeneyo zezinto ezizodwa, ezo kunzima ukuzifumana okanye ukuzenza.
Kule meko, le yenye ye Iifoto zewebhu ze-Photoshop apho uyakufumana inani elikhulu lemizekelo, elilungelelaniswe zombini ngokodidi kunye nobungakanani. Eyona nto ilungileyo ikhoyo kwaye inyani kukuba zonke zinomgangatho olungileyo. Ewe ukukhuphela ezinye kufuneka ube neakhawunti yasimahla, kwaye ukuba imifanekiso mikhulu, uyayifuna iakhawunti yeprimiyamu (ebiza imali).
Kodwa ngokubanzi, ubungakanani obuphakathi busebenza kakuhle kakhulu.
Imibhalo yasimahla kaMayang
Kule webhusayithi uya kuba nakho ukukhetha phakathi kwe ngaphezulu kweefayile zemifanekiso ezingama-4000 ezibanjisiweyo. Iwebhu inoyilo oludala kakhulu, kodwa oko akuthethi ukuba iinketho ezikunika zona azikho mgangathweni, ngokuchaseneyo.
Ungazifumana zahlulwe zaziindidi ngeendidi, eziza kukunceda ufumane oko ukufunayo.
Imifanekiso yeFotohop: IArroway Textures
Ingcali kwiFotohop textures, iwebhu ibamba iintlobo ezininzi zedijithali ezenziwe ngokwendidi ezahlukeneyo. Ngoku, abakhululekanga. Banomgangatho ophakamileyo kwaye bayagqiba, kodwa kuya kufuneka ubahlawulele.
Bayakuvumela ukhetho lokukhuphela ubume kwisisombululo esisezantsi, kodwa kuphela kusetyenziso lomntu. Oku kunokukunceda uzobe iprojekthi yakho, kwaye ukuba umthengi uyayithanda, yithenge.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Ukuhlelwa » Imifanekiso yeFotohop: uzikhuphele phi